ISethembiso Sobudlelwano Namakhasimende - Abenzi Million. Sinikeza izixazululo ezihamba phambili kumakhasimende ethu. isibambiso sobudlelwano bamakhasimende, isibambiso sobudlelwano bamakhasimende abenzi bezigidi, izixazululo zobudlelwano beklayenti mm izixazululo, izixazululo ze-mm, izixazululo ze-mm inc, izixazululo ze-mm izixazululo, izixazululo ze-mm, izixazululo ze-mm llc, izixazululo ze-mm ltd, i-mm llc, i-mm solution inc, i-mm solution llc , mm solution ltd, isibambiso esihle sobudlelwano bamakhasimende, isibambiso sobudlelwano bamakhasimende aphezulu, ubudlelwane bamakhasimende, ubudlelwano bamakhasimende obungabizi, ubuhlobo obuhle bamakhasimende, ubudlelwano bamakhasimende obulula, ubudlelwane bamakhasimende, ubudlelwano bamakhasimende obungabizi, ubudlelwano bamakhasimende obuhle kakhulu, ubudlelwano bamakhasimende obulula, inkampani yobudlelwano bamakhasimende, inkampani ehamba phambili ebudlelwaneni bamakhasimende, inkampani ephezulu ebudlelwaneni bamakhasimende, inkampani ebudlelwaneni bamakhasimende, inkampani ehamba phambili ebudlelwaneni bamakhasimende, inkampani ephezulu yezobudlelwano bamakhasimende, abeluleki bobudlelwano bamakhasimende, abeluleki abahamba phambili bobudlelwano bamakhasimende, abeluleki abaphezulu bezobudlelwano bamakhasimende, ama-ejensi obudlelwano bamakhasimende , ama-ejensi amahle kakhulu wobudlelwano bamakhasimende, ama-ejensi aphezulu wokuxhumana kwamakhasimende onship, mm services inc, mm services, mm services corp, mm services ltd, enikeza umuzwa omuhle weklayenti.
ISIFISO SOBUDLELWANE BAMAKlayenti
ISethembiso Sobudlelwano Namakhasimende - Abenzi Bezigidi
Sihlinzeka ngezinsizakalo ngqo noma ngokusebenzisa ubudlelwano bethu nokubopha kwethu emhlabeni wonke futhi inhloso yethu njalo ukuhlinzeka amanani ashibhile kuyo yonke insizakalo kodwa kumasevisi athile kanye namazwe singabiza ngo-5% - 15% uma kuqhathaniswa nomhlinzeki wesevisi othile oshibhile kulelo zwe kodwa siqinisekisa ukuthi zonke izinsizakalo zethu zihlolwe kahle, zivuselelwa futhi zithembekile, njengoba, thina ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili nezisebenza kahle kuphela ezisiza amaklayenti ethu ukonga isikhathi, imali nezinye izinsiza ngokuthola okungcono kakhulu, ukuze, amaklayenti ethu angalokothi azisole ngokuchitha isikhathi, imali nezinsizakusebenza.
Ngaso sonke isikhathi sizama ukunikeza okungcono kakhulu ngentengo ephansi kakhulu.
Ngokwazi kwethu, siyazi ukuthi ukwaneliseka nempumelelo yamakhasimende ethu yimpumelelo yethu. Isibambiso sobudlelwano bamakhasimende wezigidi zabathengi bethu sinjengokulandelayo:
Uzophathwa ngenhlonipho nenhlonipho ekusebenzisaneni kwakho nathi.
Ezindabeni ezihlobene nokuthuthela kwelinye izwe, iklayenti lizohlinzekwa ngokubonisana nommeli, umthwalo omkhulu, incazelo eningiliziwe, nezimpendulo emibuzweni yamakhasimende.
Ezindabeni eziphathelene nokwakhiwa kwenkampani kanye nokuvulwa kwe-akhawunti yasebhange, iklayenti lizohlinzekwa ngokubonisana nomeluleki webhizinisi oqeqeshiwe, isibopho esikhulu, incazelo eningiliziwe, nezimpendulo emibuzweni yamakhasimende.
Ukuhlolwa okuthembekile okususelwa kuzidingo kanye nencazelo yanoma yiziphi izinketho ezikhona.
Asincomi izinsizakalo ukwenza nje imali.
Uma iklayenti likhetha ukugcina izinsizakalo zethu, sibathumela isivumelwano esibhaliwe semali esichaza imigomo yesevisi.
Uma ukhetha ukugcina izinsizakalo zethu, khona-ke iklayenti libuye livume ukungabuyiselwa kwemali kwanoma yiziphi izimali ezikhokhelwe noma iyiphi insizakalo. Sihlala sihlinzeka ngezinsizakalo ezithembekile futhi uma insizakalo ihlinzekiwe ayikho indlela yokubuyela emuva njengoba lokhu kuyinsizakalo yobuchwepheshe engenakulinganiswa futhi ibuyiselwe emuva njenganoma yimuphi umkhiqizo.
Amaklayenti anamalungiselelo emali ekhokhwayo "ekhokhwa ngokufihlekile" akhokha imali eyodwa ukumboza yonke insizakalo echazwe Esivumelwaneni Semali. Asikhokhisi imali eyengeziwe ngezingcingo, ama-imeyili noma imihlangano. AKEKHO ABATSHAZI or IZINDLEKO EZENGEZIWE ngokubonisana okwengeziwe, uma kudingeka.
Kwingxoxo yabokufika uma kudingeka, umhlangano wokulungiselela ukuxoxisana nommeli ufakiwe emalini yethu.
Engxoxweni yokuvula i-akhawunti yasebhange uma kudingeka, umhlangano wokuhlolwa kwengxoxo nomxhumanisi / ummeli webhizinisi ufakiwe emalini yethu.
Imibuzo ye-Onboarded Client`s ivame ukuphendulwa osukwini lwebhizinisi olungu-1 noma nangaphambi kwalokho kuye ngomehluko wesikhathi.
Sinikeza ithuba lokuphumelela ngokwethula ukunakekelwa okuhle kakhulu ngendlela efanele.